အမျိုးသား Archives - Page5of 211 - Focus Myanmar
မန္တလေး သူလေးတွေနဲ့ ရည်းစားတော်သင့်တဲအကြောင်းအရင်း ၅ချက် !
မန္တလေးသူလေးတွေ အများစုကတော့ ဟန်မဆောင်တတ်ကြပါဘူး ။ အရှိကို အရှိတိုင်း ဘွင်းဘွင်းပြောတတ်ကြတတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေး စိတ်ကောက်နေလား ? ဗိုက်ဆာနေလို့ ရစ်နေတာလား ? အစရှိတာတွေကို အခြားဒေသ က ကောင်မလေးတွေ လို အိုက်တင်မခံတတ်ကြတာကြောင့် ကိုယ့်ကောင်မလေးအကြိုက်ကို အလွယ်တကူလိုက်လျောပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီအချက်လေးကလည်း မန္တလေးသူလေးတွေရဲ့ အားသာချက် တစ်ခုလို့ တောင်ဆိုရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ဆရာဝန်တစ်ဦး ဝင်စားတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူဝင်စားသမီးလေး “မအိသဇင်​နိုင်​”
နိုင်​ငံခြားသားနှစ်​ဦးအား သွား​ရောက်​နှုပ်​ဆက်​စကား​ပြောရာမှစ၍ အပြန်​အလှန်​​ပြောဆို​နေမှုအား စတင်​သတိထားမိပြီး မိဘများမှာအံ့သြခဲ့ရတယ်​လို့ သူရဲ့ဖခင်​ဖြစ်​သူက ​ပြောပြပါတယ်​
သူမ​နေထိုင်​ရာ အနီးပတ်​ဝန်းကျင်​မှာလည်း အင်္ဂလိပ်​ဘာသာစကားအား ကျွမ်းကျင်​စွာ ​တတ်​​မြောက်​သူ အင်​မတန်​ရှား ပါတယ်​ ~~~
အများလက်​ခံယုံကြည်​တာက​တော့ ‘အင်္ဂလိပ်​လူမျိုး ‘ ဝင်​စားတယ်​လို့ယူဆကြပြီး အရင်​ဘဝ၏ တစ်​စိတ်​တစ်​​ဒေသ သူမှတ်​မိသမျှ ​ပြောပြတာက​တော့ ~ ~ ~
အရင်​ဘဝ သူ့နာမည်​က ‘ ဂျင်​မီ ‘
၂၀၁၂ တုန်းက UAE နိုင်ငံကို အလုပ်သွားလုပ်ပြီးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အပြီးပြန်တော့မယ့် အချိန်မှာ လက်ထဲမှာ ငွေ သိန်း၂၀ပဲ ရှိတာနဲ့…
ငွေသိန်း ၂၀နဲ့ ဘာစီးပွားရေးလုပ်လို့ရလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အပေါင်းအသင်းတွေကို လိုက်မေးကြည့်မိတယ်…
ဘယ်သူမှ ရေရာတဲ့ အဖြေမပေးနိုင်ကြဘူး…မပေးနိုင်တာ သူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူး…နဂိုကတည်းက ကိုယ်ပေါင်းသင်းနေတဲ့လူတွေဟာ ကိုယ့်လိုလူတွေကြီးပဲ ဖြစ်နေတာကိုး…စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာ ဝန်ထမ်းလုပ်ပြီး လခစားနေသူတွေဆိုတော့ မသိကြတာ မဆန်းပါဘူး…ကိုယ်မသိသလို သူတို့လည်းမသိဘူးပေါ့ …
ခါးပိုက်နှိုက် ရဲ့ ကြင်နာစိတ်ထား (ဗန်းမော်သိန်းဖေ)
တကယ်တော့ ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ ငွေ ၅ ထောင်ဟာ အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခု အလုပ်မရှိတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒီပိုက်ဆံဟာ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးပါပဲ။ ပိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာက ဒီငွေ ၅ ထောင်ကို အမေ့ဆီ မပို့လိုက်ရဘဲ ခါးပိုက်နှိုက်ခံလိုက်ရတာပါ။ အမေ့ဆီကို ပိုက်ဆံ အမြန်ပို့ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော် အသည်းအသန် စဉ်းစားနေပါတယ်။
တစ်ပတ်အကြာမှာ အမေဆီက စာတစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော် စာကို ချက်ချင်း ဖွင့်မဖတ်ရဲဘူး။ အမေ ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့စာ ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါ။ အားတင်းပြီး စာကို ဖွင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ စာထဲမှာ ခုလို ရေးထားတာကို ဖတ်ရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော် အချိန်က ဖြစ်ပါတယ် ။ကျွန်တော် နှင့် သူငယ်ချင်း များဖြစ်တဲ့ အောင်မြင့် ကိုမြင့်ရွှေကြီး တို့ မဲတော အနောက်ကျောင်း ကထိန် ည Video ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ ။
ကထိန် က Video ကြည့်အပြန် ည ၁ နာရီ ခန့် မဲတောရွာနှင့် ပြည် ရန်ကုန် ကားလမ်း အကူး လမ်းရိုးမှာ ကိုမြင့်ရွှေ ကို မြွေပွေး ကိုက် ခံရပါတယ် ။ သူမထနိုင်တော့ အနီးမှာရှိတဲ့ ဘိုရုံကျောင်း ကို ထမ်းပြေးခဲ့ပါတယ် ။
​ရေနှင့်​​ဖျော်​စပ်​ထား​သော အချိုရည်​များ ၊ ​သစ်သီးများကို​ရေဖြင့်​စိမ်​ထား​သော​ရေများကို များများ​သောက်​ပြီး ​ရေသီးသန့်​ ​ရေသန့်​​ရေ​သောက်​သုံးခြင်းနည်းပါက ဦး​နောက်​အတွင်​လိုအပ်​​သော ​အောက်​စီဂျင်​နည်းပါးသဖြင့်​ဦး​နောက်​ကြည်​လင်​လန်းဆန်းမှု့ နည်းခြင်း ၊ ကိုယ်​အပူချိန်​ညီမျှ​ထိန်းသိမ်းစွမ်းအင်​နည်းပါးခြင်း နှင့်​အတူ အသားအ​ရေစို​ပြေမှု့အတွက်​ပါ ​လျှော့နည်းကျဆင်းပြီး ​ခြောက်​​စေပါသည်​ ။ ​ရေသီးသန့်​ကို များများ​သောက်​သုံးခြင်းသည့်​လည်း စိတ်​ကြည်​လန်းဆန်း​စေမှု့ဖြစ်​​ပေါ​စေပါသည်​ ။